“မစွဲစကောင်း ……….စွဲစကောင်း………………”(တရားရုံးရဲ့အကြောင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “မစွဲစကောင်း ……….စွဲစကောင်း………………”(တရားရုံးရဲ့အကြောင်း)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 6, 2012 in My Dear Diary | 16 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ဥပုဒ်နေ့က ကိုအောင်မောင်းနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြောကြရင်းနဲ့ ကိုအောင်မောင်းက သူတို့လုပ်ငန်းတင်မှာမကဘဲလုပ်ငန်းတော်တော်များများ
မှာ အကြွေးတောင်းမရတာတွေ အကြွေးဆုံးတာတွေ ဆိုင်ပိတ်ပြေးတာတွေ ပိုပိုများများလာ တာကိုပြောပြပါတယ်။
လက်ရှိအနေအထားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့မန်းလေးမှာရောင်းကြ၀ယ်ကြတာအားလုံး အကြွေးစနစ်တွေချည်းပါဘဲ။
မြို့ထဲကဆိုင်တွေရော နယ်သမားရော အကြွေးချပေးမှရောင်းရတာပါ။.
လက်ငင်းဆိုတာ စူပါမတ်ကက်ကြီးတွေဘဲ ရပါတယ်။
ရပ်ကွက်ထဲက လက်လီဆိုင်လေးတွေတောင်မှ ထိုက်သင့်သလောက်အကြွေးပေးရပါတယ်။
ပစ္စည်းတစ်ခုထဲကို ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါလာတော့ ဈေးကွက်လုတဲ့တိုက်ပွဲက
အဲတော့ အပြိုင်အဆိုင်ဈေးလျော့ပြီး အလုအယက် အကြွေးပေးကြပါတယ်။
ကုန်ကြွေးကို တစ်ပတ်ဆယ်ရက်ကနေ အရေအတွက်များများယူရင် လနဲ့ချီပြီးပေးထားကြပါတယ်။
ရောင်းသူတွေက ၀ယ်သူတွေကို အဲဒီလို အလိုလိုက်တော့ “ဘာဝယ်ဝယ်အကြွေးရမှ “ဆိုတဲ့စနစ်
@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@
အဲလို အကြွေးလွယ်လွယ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတော့ကုန်သည် တော်တော်များများကလည်း ငွေကိုလှည့်သုံးတတ်လာကြပါတယ်။
ရောင်းလို့ရတဲ့ရောင်းကြေးထဲကနေ သူများအကြွေးကို မဆပ်သေးဘဲ
ပေးရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မရောက်မခြင်း လှည့်သုံးပါတော့တယ်။
အဲလိုလှည့်မသုံးတဲ့လူဆိုရင် “ လူနုံ လူအ”စာရင်းထဲမှာပါနေသလိုလို ။
တစ်ချို့ကတော့ အကြွေးလွယ်လွယ်ယူပြီး သူများကို အကြွေးလွယ်လွယ်ပြန်ချပေးပါတယ်။
(ကိုယ်တစ်ဆင့်ပြန်ပေးတဲ့လူက မပေးတော့ ကိုယ်ကလဲစိုက်မပေးနိုင် အဲတော့ပင်ရင်းစပေးတဲ့လူက အနစ်နာခံပေါ့)
တစ်ချို့ကတော့ လုပ်ငန်းအသစ်တွေချဲ့ပြီး အပုံပြောင်းကြ
(မအောင်မြင်တော့ သုံးထားတဲ့ငွေက ပြန်ထွက်မလာ)
တစ်ချို့ကတော့ ရွှေဝယ်လိုက် အိမ်ဝယ်လိုက် ကား ၀ယ်လိုက် သူများပိုက်ဆံနဲ့
ဒီအထဲမှာ ဘုရားအမကျောင်းအမအမည်ခံလို့ လှုဒါန်းသူကလဲရှိပြန်ပါသေးတယ်။
တစ်ချို့တော့ လဲ လောင်းကစားဘက်မှပုံအောပါတယ်။
အဲလိုဖြစ်လို့ကတော့အပြင်မှာ လူမူ့ရေးအရပြေလည်အောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်လို့အရင်ညှိကြပါတယ်။
ညှိလို့မရရင် ဒါမှမဟုတ် မပေးဘူးလို့ ဘူးခံငြင်းနေရင်တာ့ တရားစွဲဘို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာက “တရားရုံး”ဆိုတာကြီးကို တတ်နိုင်သလောက်မရောက်အောင်
တရားရုံးဆိုတာက ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ သာမာန်လူတွေ နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာ၊
နားထောင်လို့ခက်တာ သေချာနားမထောင်ဘဲ ဖြေလိုက်ရင် အမှန်ကနေအမှားဖြစ်သွား တာကတော့အမှန်ပါဘဲ။
အမူ့တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ရဲစခန်းသွားရ ရှေ့နေဆီသွားရ
အမူဆိုင်ပြီဆိုပြန်တော့လဲ ရုံးသွားရ စောင့်ရပြုရ နဲ့ အချိန်အတော်လေးပေးရသလို
ရှေ့နေခ ဘာခ ညာခနဲ့ ကုန်တာက လည်းမနည်းပြန်ပါဘူး။
အဲဒီနေ့ကတော့ ကိုအောင်မောင်းက အပြောသမား ကျနော်က နားထောင်သမား။
??????????????? ???????????????????? ???????????????????? ???????????????
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ အကြွေးဆုံးတဲ့အမူ့တစ်ခုမှာ သက်သေအဖြစ်ပါဘူးတယ်လေ။
ဈေးထဲက ဆိုင်တစ်ဆိုင်က စီးပွားပျက်စအချိန်မှာ ရစရာရှိတာတွေကိုပေးဘို့ အကြိမ်ကြိမ်သွားတောင်းလဲမပေးဘူး။
စီးပွားပျက်ဘို့နီးလာပြီးဆိုတဲ့ဆိုင်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ကတိပျက်တာက အရင်စတာဘဲ။
အကြွေးပေးစရာရှိတာတွေကို မပေးနိုင်တော့လူမူ့ရေးအရခေါ်ညှိဘို့ လုပ်ရပါတော့တာပေါ့။
အစက တော့ ဈေးရုံးဖြစ်ဖြစ် ရပ်ကွက်ရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပြီး စကားပြောကြမယ်လို့သူတို့ကိုလှမ်းသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲတော့ အဲဒီဆိုင်ပိုင်ရှင် လူက” အဲလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ရုံးမှာဘဲပြောကြရအောင်ပါ”
လို့တောင်းပန်တာနဲ့ဘဲ ကျနော်တို့ရုံးမှာဘဲ တွေ့ပြီးစကားပြောဘို့စီစဉ်လိုက်ရပါတယ်။
အမှန်ကတော့ ကျနော်တို့က အဲဒီလူကို ညှာလိုက်တာပါ။
လေးငါးခြောက်ကြိမ် ပင့်မှ ကိုယ်တော်က ကြွလာပါတယ်.။
သူ့ကို ပေးစရာရှိတာမှန်တဲ့အကြောင်း ဒီငွေကို ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးမယ်ဆိုတဲ့
ဒါပေမယ့်သူက ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဆိုတာကိုတော့ လက်သင့်မခံဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ ဆိုင်ခန်းရောင်းရလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပြင်နေရာက ပိုက်ဆံရရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်
လူလည်းမလာဆိုတော့ ရှေ့နေကနေတစ်ဆင့် တရားစွဲဘို့ပြင်ရပါတယ်။
တိုတိုပြောရရင် တရားရုံးက ဒီအမူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။
အဲဒါနဲ့ဘဲ တရားရုံးတော်ပေါ်မှာ ရင်ဆိုင်ကြဘို့ အသင့်ပြင်ကြရပါတော့တယ်။
$$$$$$$$$$$$$$$$$ % $$$$$$$$$$$$$$$$$ %$$$$$$$$$$$$$$$$%
တစ်ရက်တော့ ရှေ့နေက လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာရုံးချိန်းရှိတယ် တရားရုံးကို မနက်ဆယ်နာရီ
အထူးသဖြင့် ကုလားကားနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကားတွေမှာပါတတ်တဲ့ တရားခွင်တွေကိုပေါ့။
နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေကလဲ မာန်အပြည့်နဲ့ ထိုင်နေ.။
တစ်ခါတစ်ရံ ပြောလိုက်တာသဘောကျလို့ဖြစ်ဖြစ် သဘောမကျလို့ဘဲဆိုဆို
တရားရုံးထဲမှ နည်းနည်းလေးအုံးအုံးကျွက်ကျွက်ဖြစ်သွားရင် ငြိမ်သက်ဘုိ့ မဆူဘို့အတွက်
ဒါကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ တရားခွင်ပါ။
????????????? ???????????????? ???????????????? ?????????????
ချိန်းထားတဲ့နေ့ရောက်တော့ မနက် ဆယ်နာရီမထိုးခင်တရားရုံုးကိုအရောက်သွားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ရုံးရောက်တော့ ရုံးခန်းတွေတံခါးဖွင့်ထားတာမြင်ပေမယ့် ကျနော်ဘက်ကရှေ့နေလဲမတွေ့ပါဘူး။
ဟိုရုံးဒေါင့်နားကခြံစည်းရိုးနား မှာတော့ လူစုစု။
ရုံးထုတ်မှာ ပါတဲ့ အချုပ်ကျတွေရဲ့ မိသားစုတွေကလာတွေ့ဘို့စောင့်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်။
ဒီဆိုင်နဲ့သိပ်မဝေးတဲ့ဆိုင်လေးကိုပြောင်းထိုင်တော့ ရှေ့နေက ကျနော့်ကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်
ဟိုဘက်ရှေ့နေက မေးတာကို သေချာနားထောင်ပြီးမှဖြေဘို့။
နောက်ကျနော်တို့အမူ့ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ရင် ဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတာကို သင်ပေးပြန်ပါတယ်။
တရားရုံးထဲဝင်တော့ နေရာတော်တော်များများမှာ “ဆေးလိပ်မသောက်ရ ကွမ်းမစားရ “
အပြင်မှာတော့ အမူ့ဆိုင်မယ့်သူတွေရော ချိန်ဘာဆင်းမယ့်သူတွေရော အတော်မျာများက
“မီးရထားက မလာသေး ခရီးဝေးသွားမည့်သူလဲပါသည်”
“ ဟောတရားသူကြီးလာပြီ”ဆိုလို့ကြည့်လိုက်တော့ စောစောက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတွေ့
လက်ထဲမှာတော့ စီးကရက်မီးခိုးလေးက တလူလူ။
အဲဒီမှာသဘောပေါက်လိုက်တာက ချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်က ကျနော်တို့လိုခဏလာသူအတွက်သာ
ဒါပေမယ့် စုတ်နေတော့ အားလုံးကိုတော့ ဖတ်လို့မရပါဘူး။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အတော်လေးကို ပက်ပက်စက်စက် ကျိန်စာတိုက်ထားတာ
လိမ်ညာပြောရင် အရလာမယ့် အပြစ်တွေကများများ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောလို့ရလာမယ့်
ရှေးကတည်းက သုံးလာတာ အခုထိဆိုတော့ ခေတ်မမီတော့ဘူးလို့ပြောရင်လဲရပါတယ်။
တရားခွင်စပြီဆိုတော့ တစ်ဖက်ရှေ့နေက ထုံးစံအတိုင်း နာမယ်တွေဘာတွေမှတ်ပုံတင်
ကျနော်တို့ပြောတာကို လက်နှိပ်စက် တစ်ဖျောက်ဖျောက်ရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ရှေ့နေမေးတဲ့မေးခွန်းတွေက ကျနော်အတွက် မနည်းနားထောင်ပြီးဖြေရတာလဲ
“ဒီရစရာ ရှိတဲ့ ငွေတွေကို ပေးပြီးတာ ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလား”လို့ တည့်တည့်မမေးဘဲ
စကားလုံးကို ရှုပ်အောင် ကွေ့ဝိုက်မေးနေတော့ မှားဖြေမိမှာလဲစိုးတာအမှန်ပါဘဲ။
အပြင်မှာဘယ်လိုမှန်မှန် တရားရုံးတော်မှာထွက်တဲ့ထွက်ချက်က အတည်ဖြစ်သွားမှာကိုး။
အဲတော့ မှားမဖြေမိအောင်သတိထားနေရတော့ စိတ်တင်းကျပ်တာပေါ့။
ကျနော်စစ်ဆေးနေတာတွေ မေးမြန်းနေတာတွေကို စိတ်ဝင်စားပုံမရပါဘူး။
ထိုင်သာနေတယ် စိတ်တွေက အဝေးလွင့်နေသလိုပါဘဲ။
ကျနော်နောက်မှာ အမူစစ်မယ့်သူတွေအများကြီး ကျန်နေသေးတယ်လေ။
အဲတော့လဲ ငွေကုန်တာ မကုန်တာ ပြန်ရတာ မရတာထက် အလုပ်လုပ်
ရမယ့်အချိန်တွေကို အလဟဿ ဖြုန်းတီးနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
ဒီတော့လဲ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ တရားစွဲမယ်ကြံရင်အချိန်ကုန် ငွေပန်းဆိုတာကို
&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&
ကျနော်တုံးကတော့ လဲ သိပ်မထူးပါဘူး။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကို လူတစ်အုပ်ကြီးနဲ့ထိုင်။
တစ်ခါ ကိုယ့်ရှေ့နေက ရက်ချိန်းပြန်ယူ၊
ထမင်းစားချိန်ရောက်လို့မှ မစစ်ရသေးရင် သွားပေတော့
မနက်ကိုးနာရီလောက်ရောက်နေတာ ညနေသုံးနာရီလောက်မှ ပြီးတဲ့အခါပြီး။။
ကြာတော့လဲ ဒီလိုအမူ့ဆိုင်ရမှာ တကယ်ကိုကြောက်လာပါတယ်။
အဲတော့လဲ တော်ရုံတန်ရုံ နစ်နာရုံလောက်နဲ့တရားမစွဲဘဲ
သူများတွေဆီမှာတော့ မရောက်ဘူးလို့ ဘယ်လိုတရားရင်ဆိုင်ကြတယ်ဆိုတာမသိပါဘူး။
ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ဒီအတိုင်းမို့ တရားရုံးသွားရမယ်ဆိုရင်
(ထစ်ကနဲ့ရှိ တရားစွဲလိုက်ပါလား ဟု တိုက်တွန်းတတ်သောအဝေးမှ မိတ်ဆွေအတွက်အမှတ်တရ)
ယူအက်စ်မှာလည်း.. တရားတဘောင်ဖြစ်ရင်.. လွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။
justice တရားမျှတမှုနဲ့.. အဆုံးအဖြတ်ပေါ်ကို တင်ရတဲ့အထိ ဖြစ်လာရင်.. တင်ရမှာပါပဲ..။
ဒါဟာ.. လူသားနဲ့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်လိုအပ်မှုတခုဖြစ်ပြီး.. ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းအတွက်လည်း လိုအပ်မှုတခုသာဖြစ်ပါတယ်..။
(အထူးသဖြင့်) ခရစ်ယန်တွေအတွက်.. နောင်တခါ.. ဘုရားသခင်ဆီမှာ.. အဆုံးအဖြတ်ခံယူရင် အပြစ်ကင်းကြောင်း သက်သေလိုအပ်ချက်တခုဖြစ်တာမို့.. အထူးကို သတိထားလုပ်ကြတယ်လို့ထင်နေမိတယ်..။
ဂျူးတွေကိုဟစ်တလာကသတ်ခဲ့ပြီးနောက်..ကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့. ဂျူးတွေဟာ.. သူတို့ဇာတိနွယ်တွေကိုသတ်ခဲ့တဲ့နာဇီတွေနောက်ကို… ပြန်လိုက်ကြရာမှာ.. လက်စားချေဖို့ထက်.. လူမျိုးနွယ်တခုအတွက်.. တရားမျှတမှုနဲ့.. သမိုင်းမရိုင်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး.. ရေဆုံးမြေဆုံး လိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လေ..
တရားခံကို ဖမ်းမိရင်လည်း.. အသက်မသေဖို့စောင့်ရှောက်ပြီး.. တရားရေးပေါ်တင်.. အဆုံးအဖြတ်ကိုကမ္ဘာကိုအသိပေးတာဟာ.. တရားရေးနဲ့.. မျှတမှုကို ဘယ်လိုမြင်တယ်..လေးစားတယ်ဆိုတာ.. ပြသဖို့သာဖြစ်ပါတယ်..။
ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်တွေနဲ့.. ရိုးရာဓလေ့တွေ ခေတ်မှီလာအောင်ပြင်ယူရင်း… တရားရေးမဏ္ဍိုင်ကို.. မွန်းမံရမှာပေါ့..။
.. တရားသူကြီးတယောက်က.. စည်းကမ်းဆိုင်းဘုတ်ကို မလိုက်နာပဲ.. ပြုမှုလုပ်ကိုင်တာကို.. မီဒီယာက လူထုသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရင်.. မီဒီယာကတာဝန်ကျေပါတယ်..။
ဒီကျေတဲ့တာဝန်ဟာ.. လူအများကြီးအတွက်.. ကောင်းတာဖြစ်လာစေတာမို့.. ဘယ်လောက်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်လည်း..တွေးကြည့်နိုင်မှာပါ…။
ဒီလိုတွေအတွက်.. အောက်ခြေပိုင်း.. တကယ်ဖြစ်နေတာတွေကို.. မီဒီယာပေါ်တင်ရေးပေးတာမျိုးက ..အထူးလိုအပ်မှာပါ..။
ဒီနိုင်ငံမှာ လူလိမ်လူကောက် ကတိပျက်သူတွေ ဆထက်ထမ်းပိုးတိုးပွားလာတာဟာ
ပြည်သူတဦးစီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကို ဖိဖိစီးစီးအကာအကွယ်မပေးလို့ ဖြစ်ရတာလို့ယူဆပါတယ်။
လူကောင်းတွေက လွယ်လွယ်နဲ့ လူလိမ်ဘယ်ဖြစ်သွားတော့မလဲ။
အခုတော့ …. ဒီဥပဒေ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့တော့ ….. အေး..ဆေး……။
တရားရုံး၊ရဲစခန်း၊ရပ်ကွက်ရုံး၊ပြည်သူ့ ဆေးရုံ သများသွားရမှာ သိပ်သိပ်ကြောက်ပဲ..
ငွေ သောက်သောက်လဲ ကုန်မဲ့နေရာတွေ တားတားကြောက်ကြောက်..
အူးပေါက်လို မပြောတတ်လို့ .မပြောတာ…အူးပေါက်ပြောခဲ့တာထက် တော်တော်ဆိုးဆိုးတွေပဲလို့ ထောက်ခံပါ၏
ကျုပ်တို့ ဆီမှာ က ကြောက်တယ်ဆိုတာထက် ၊ ရွံ တယ် ဆိုတာ မျိုးလဲ ပါတာကိုး
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက လိုင်စင်မရှိဘဲ ဆိုင်ကယ်စီးလို့ မော်တော်ပီကယ် က ဖမ်းတယ် ။ တရားရုံး ကို သွားခဲ့ရတယ် ။ အသက်ကလဲ မပြည့်သေးတော့ မိဘ ပါ ခေါ်သွားရတာပေါ့ဗျာ ။ တရားသူကြီး က အမျိုးသမီး ၊ အမှုနဲ့ မဆိုင်တဲ့ စကားတွေ နဲ့ စော်ကားတယ် ။ မိမဆုံးမ ၊ ဖမဆုံးမ ဘာလား ပေါ့ ၊ အမှန် က သူ့ မှာ အဲ့လို ပြောခွင့် ရှိရဲ့ လား ဆိုတာ ကို ၊ အဲ့တုန်းက နားမလည်ခဲ့လို့ ၊ ပြန်မတုံ့ ပြန်နိုင်ခဲ့တာ ဝမ်းနည်း စရာ ပါဘဲ ။
တကယ်တော့.. ယူအက်စ်ကလူတဦးချင်းစီက.. တရားတဘောင်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်ကြစေချင်တာဟာ.. ငွေကြေးစံနစ်ရဲ့တွန်းအားတခုကလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်။
လူတွေကို.. ခရက်ဒစ်စကိုလ်းလို.. အမှတ်ပေးစံနစ်နဲ့.. ပေးထားဖြတ်ထားလို့ပါ…။
တရားရှုံးထားသူတဦးဟာ.. သူ့ဆီမှာ.. အမှတ်ပေးစံနစ်အရ အနှုတ်ပြနေမှာဖြစ်ပြီး.. ဒီကိန်းဂဏန်းက.. သူဘာလုပ်လုပ်.. ဒုက္ခပေးနေမှာပါ..။
… အိမ်ထောင်ပြုရင်.. အာမခံဝယ်ရင်.. ကားဝယ်ရင်.. အကုန်အဲဒါကိုပြန်လှန်ကြည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်….။
မြန်မာပြည်မှာ.. အဲဒီအမှတ်ပေးစံနစ်တခုလုပ်သင့်တယ် ထင်တာပါပဲ..။
ဒီမှာက စာရင်းဇယား ထိန်းချုပ်မူ့အပိုင်း အဲဒီမှာလောက်စနစ်တကျမရှိတာရယ်။
အချိတ်အဆက်မမိတာလည်းမပြောနဲ့လေ…….. သူတို့ အချင်းချင်းလည်း တစောင်းနဲ့မျက်ချေး သူ့ဆော်ရင်ကိုယ်လည်းဆော်မယ်…။ သူ့အလှည့်ကိုယ့်အလှည့်ဆိုတဲ့ စိတ်ကဖျောက်မှမဖျောက်တာကိုး……….. ။
တရားရုံးမှာ လက်နှိပ်စက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။ ကိုပေါက်စဉ်းစားသလိုမျိုး ကျနော်စဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်။ ကွန်ပြူတာက ဖျက်ရပြင်ရအရမ်းလွယ်တာ အားနဲချက်ပဲ ။ လက်နှိပ်စက်နဲ့ရိုက်တာက ပြင်ရင်သိသာတယ်။
တရားမမှုဆိုတာနဲ့ တရားစွဲမည့်သူက တီကောင်ဆားတို့သလို တွန့်သွားတတ်ပါတယ်။
မှန်းကန်မြန်ဆန်တဲ့ တရားဥပဒေ ရဲ့ အကာအကွယ်ကို အပြည့်အ၀ ရရှိ ဖို့တရားသူကြီးတွေရဲ့ လစာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အချိုးကျဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ အာဏာကြီးပြီး စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်သူတယောက်အဖို့ ဘာတွေလုပ်မယ်လုိ့ ထင်ပါသလဲ။
ပါးစပ်ပါသော်ငြားလည်း ဗိုက်ဝနေရင် ထပ်စား ဘို့ စိတ်မပါမှာကတော့ တကယ်သေချာတယ်
မြန်မာတွေအတွက်ကတော့… အများကြီးပြုပြင်ရဦးမယ်..။ မှန်ပါတယ်..ပြင်ရမှာတွေတပြုံတမကြီးပါ…
အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့..အစိုးရရုံးတွေက၀န်ထမ်းတွေ အချိန်ကိုမလေးစား တန်ဘိုးမထားတာဘဲ..
ရှိတဲ့အချိန်တွေ နှမျောကျလို့..အစည်းအဝေးဟေ့ ဆိုရင် တာဝန်ရှိလူကြီးအစား အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေ
ဘဲရွေးလွှတ်တော့တယ်…တရားရုံးတွေရဲ့ လပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတော့ အဆိုးတကာ့ ထိပ်ခေါင်ဘဲ..
ဆေးရုံသွား သတင်းမေးတာမှ ကုသိုလ်ရမယ် … ၊ တရားရုံးကိုတော့ သွားချင်ပါဘူးဗျာ…၊
အမှုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ခရိုင်ရဲ ၊ မြိုနယ် ရဲ ၊ အမှုလိုက်ရဲ ၊ စီအာအို ၊ ဆွဲချ ( အစိုးရရှေ့နေ) ၊
နောက်ဆုံး တရားသူကြီး ပေ့ါဗျာ ..၊
အကုန်ကို တန်းစီပြီး ပေးရ တော့တာ ..၊ ပါးစပ်ပေါက် ကျယ်ကျယ်ကြီး ၊ လက်ဖြန့်တောင်းတဲ့
( ကျုပ်တို့ နယ် က အတွေ့ အကြုံ ပါ )
အားလုံးက လိုအပ်ချက်တွေ လွဲနေတာတွေဝိုင်းထောက်ပြမယ်ဆိုရင်
သူများပိုက်ဆံကို မတရားယူလိုက်ပေမယ့် ခံရသူက ပြန်လိုချင်လို့ တရားစွဲရင်
အချိန်တွေ ငွေတွေထပ်ကုန်မှာကြောက်တော့ မစွဲရဲပြန်ဘူး။
မတရားယူလိုက်သူကြပြန်တော့ အမူ့ရှုံးသွားရင်တောင်မှ ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေးတာ
မခံရတော့ လုပ်ရဲကြ လုပ်ရက်ကြပြန်ရော။